Ninyahow xaaskaaga sidaan u samey si ay u biya baxdo ciyoow - Hablaha Media Network
Ninyahow xaaskaaga sidaan u samey si ay u biya baxdo ciyoow
HMN:- Hadda waxaan sheegaynaa qaababka ugu fiican ee loogu tago dumarka xiliga galmada si ay u dareemaan raaxo macaan badan.
Qaabka labaad: ee isaguna muhiimka ah waxaa weeye inay xaaska dhabacan u seexato adigana gadaal ayaad uga imaanaysaa. markaad
dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad barkin u galiso gumaarka ama caloosheeda qeybta hoose. dumarka hadii qaabkaan loogu galmoodo waxaa lagu yaqaan in dhidid jirkooda kasoo duxo mida kale waxay dareemaan kacsi nooca ugu sareeya riinkoodana meel fog ayaa laga maqlaa.
RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA.